Iindumiso ku-Saint Jude Thaddeus ▷ Descub️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuba ungumKatolika, ulivile igama lika Ongcwele uJude Thaddeus. Imalunga neNgcwele, umzala weNkosi yethu uYesu nomnye wayo Abapostile abali-12. Ukongeza, uyaziwa phakathi kwamaKatolika ngemimangaliso enikwe yena. Ukuba unomnqweno wokudumisa lo Mngcwele, kwi-Discover. Kwi-intanethi sikubonisa ezinye iindumiso kuSan Judas Tadeo.
1 Inani elikhulu leendumiso eziya ku-Saint Jude Thaddeus
1.1 Umthandazo wokudumisa uSanta Jude Thaddeus
1.2 Ingoma eya kwi-Saint Jude Thaddeus
2 Kutheni le nto kudunyiswa uSanta Jude Thaddeus?
3 Umthandazo wokuthandazela kwakhe
4 Siyintoni isizathu sokuzinikela okunje?
Inani elikhulu leendumiso eziya ku-Saint Jude Thaddeus
Ukudumisa lo Ngcwele odumileyo, kwenziwe iingoma, kwenziwa iminikelo, kuthandazwa kunye nabanye. Iitempile sele zakhiwe egameni lakhe ukumnika imbeko. Apha sikubonisa umthandazo kunye nengoma yokudumisa uSanta Jude Thaddeus, ukuze akunike ukukhusela kwaye akubongoze phambi koThixo, iNkosi yethu noMdali:
Umthandazo wokudumisa uSanta Jude Thaddeus
«Ukudumisa kunye nokusikelela utata owamisela kwangaphambili u-Saint Jude Thaddeus
ukwazisa igama lakhe ezintlangeni, ebakhanyisela ngokholo.
Uzuko kuYise, nakuNyana, nakuMoya oyiNgcwele. Njengoko kwakunjalo ekuqaleni,
ngoku nangonaphakade, ngonaphakade kanaphakade, Amen.
Indumiso kunye neentsikelelo kuNyana owakhetha umzala wakhe uSan Judas Tadeo
ukumdibanisa nomsebenzi wakhe wokuhlangula ukuvakalisa iindaba ezilungileyo kubo bonke
Indumiso nentsikelelo kuMoya oyiNgcwele ogcwalise ubomi ngobabalo
ka-Saint Jude Thaddeus kwaye wamenza isixhobo esifanelekileyo sosindiso luka
lonke uluntu. Uzuko…
Uzuko nembeko kuMariya iNtombikazi, uKumkanikazi wabapostile.
owayefundise isihlobo sakhe u-Saint Jude Thaddeus amanyathelo okuqala
umpostile ukuze ebomini nasezimfundisweni zakhe abonise umhlaba
Awu Mariya, uzele lubabalo, iNkosi inawe,
usikelelwe wena phakathi kwabafazi bonke; sinentsikelelo nesiqhamo
wesibeleko sakho uYesu. »
Ingoma eya kwi-Saint Jude Thaddeus
Owu Zuko! Oyingcwele uYuda, uMpostile weNkosi,
Yiva imithandazo yomoni ohluphekileyo.
Isandla sakho esinamandla
Nciphisa iintlungu zam
I-Trocad Tadeo, kwiintyatyambo
Uzuko luye kunyana
Ongcwele uJude Thaddeus… Sithandazeleni
Kutheni le nto kudunyiswa uSanta Jude Thaddeus?
Ehlabathini lonke, amaKatolika ahlawula iindumiso ezininzi ku-Saint Jude Thaddeus. Oku kwenzeka ngenxa yokuzinikela okukhulu okwenziwe kumfanekiso wakhe, ngenxa yemimangaliso enikwe yena.
Uninzi lwabantu ludlula kumaxesha anzima kakhulu apho kubonakala ngathi akukho ndlela yokuphuma okanye isisombululo. Ngeli xesha ekuphela kwento enokunceda iya kuba ngummangaliso kwaye yile nto ifunyenwe ngabaninzi abaye bacenga uJudas Tadeo ngokucela kwakhe. Kungenxa yesi sizathu le nto lo Mntu Ongcwele esaziwa njenge «Umzekelo wezinto ezingenakwenzeka«.
Ukuba udlula kwinxalenye enzima kakhulu yobomi bakho ngenxa yelungu losapho eligulayo, ngenxa yengxaki yezoqoqosho, umtshato ongasasebenziyo, uphulukene nelahleko nabanye. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukunikezela umthandazo kuYudas Thaddeus, ngokholo kunye nentliziyo elungileyo, unokutshintsha imeko yakho.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba kumaxesha amaninzi imimangaliso yenziwa yabangcwele. Nangona kunjalo, inyani kukuba bayasithethelela phambi koThixo. Oko kukuthi, uThixo unika ummangaliso, ngelixa abaNgcwele basebenza njengabalamli ukuze imithandazo yethu iviwe. Kukwayimeko enjalo ngo-San Judas Tadeo, kodwa ube luncedo kubantu abaninzi kangangokuba ufumene uthando kunye nokuzinikela kwabo.
Umthandazo wokuthandazela kwakhe
Xa sidlula kumaxesha anzima kakhulu, uncedo lukaThixo uSomandla alukho kakhulu. Ukuba sifuna ummangaliso, kufuneka sithandaze ngokholo, ngokuzinikela, nangeenjongo ezintle. Nangona kunjalo, le yinto efuna ukuzingisa, ukongeza elukholweni kunye nentliziyo elungileyo, yiyo loo nto inokunceda ukuthandaza kwiNgcwele enokwenza ukuba izikhungo zethu zifikelele.
Nantsi imithandazo embalwa yoNgcwele uJude Thaddeus wokukunceda:
«OyiNgcwele ohloniphekileyo uJude Thaddeus, umkhonzi othembekileyo kunye nomhlobo kaYesu. Baninzi abo bakuhloniphayo nabakucela ukuba ungene el mundo iphelele, njengepateni yamatyala angenakwenzeka kunye nezizathu ezibi. Ndithandazeleni, ndiziva ndingenakuzinceda kwaye ndindedwa.
Nceda undenze ndibonakale kwaye ndikhawuleze uncedo. Yiza ngokukhawuleza undincede ngalo mzuzu weembandezelo ezinkulu ohlasela umphefumlo wam ukuze ndifumane intuthuzelo noncedo lwezulu kuzo zonke iintswelo zam, izilingo neembandezelo, ngakumbi kule (yenza isicelo sakho apha) Ndiya kumbonga uThixo ngonaphakade.
Ndiyakuthembisa, usikelelwe u-Saint Jude Thaddeus, ukuba, ndisoloko ndiyazi le nto ubabalo undinika yona, ukuba ndiya kuhlala ndikuhlonipha njengomphathi wam okhethekileyo, kwaye ndiya kukukhuthaza ukuzinikela kwakho okumangalisayo ngombulelo omkhulu. Amen.«
Siyintoni isizathu sokuzinikela okunje?
Njengoko sele kukhankanyiwe, iSan Judas Tadeo yaziwa ngokuba yi-PI-atron yezizathu ezingenakwenzeka. Oku kuthetha ukuba nokuba ungazifumana ukwintoni na, ukuba uyathandaza ucele le Ngcwele ukuba ikuncede, uyakuyifumana kwaye uzokwazi ukudlulela phambili, kuba iingxaki zakho ziya kuba nesisombululo.
Esinye sezizathu eziphambili zokuba le Ngcwele idunyiswe kangaka, ukongeza kwiinyani, yimbali yakhe. U-Judas Tadeo ukholelwa ukuba ngumzala ka Yesu, nanjengoko utata wakhe wayengumntakwabo Yosefu nomama wakhe, nangona oko kungekangqinwa, kukholelwa ukuba wayengudade boNtombikazi uMariya. Oku kunokubonisa ukuba uJudas Thaddeus unokuthembela kumandla athile, njengoYesu iNkosi yethu.
Ukongeza, wayengumPostile kaYesu, wamlandela kwaye wamkhusela kwade kwasekufeni kwakhe, xa wagwintwa kunye noSanta Simon emva kokuba uSemme, umfundi, waye wacelwa ukuba abanikele. Baye bagqiba ekubeni bazinikezele, kuba uYudas wayesithi uyibonile iNkosi kwaye wayemfuna ecaleni kwakhe. Ukuba ufuna ukuthandaza kule Ngcwele, sikubonisa ifayile ye Iinkcukacha ku-Saint Jude Thaddeus.